ပြင်သစ်-ဘယ်လ်ဂျီယံကစားခဲ့တဲ့ပွဲကို နည်းဗျူဟာပိုင်းအရ သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်
ပြင်သစ်-ဘယ်လ်ဂျီယံ ကစားခဲ့တဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲကို နည်းဗျူဟာပိုင်းအရ သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်
11 Jul 2018 . 3:48 PM
မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်နဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ရဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲမှာတော့ ပြင်သစ်အသင်းက နောက်ခံလူ အမ်တီတီ Umtiti ရဲ့ တစ်လုံးတည်းသော ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး ဗိုလ်လုပွဲကို တတိယအကြိမ် မြောက် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ နှစ်သင်းစလုံးမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပွဲက တကယ့်ကို အကြိတ်အနယ်ရှိခဲ့ပြီး ဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနှစ်သင်းရဲ့ ခြေစွမ်း၊ ကစားကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Tactical View အရ သုံးသပ်ချင်ပါတယ်. . .
နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ ပွဲထွက်ကစားပုံက (၄-၂-၃-၁) ပုံစံဆိုပေမယ့် ဘယ်လ်ဂျီယံနည်းပြ မာတီနက်ဇ် Martínez က (၃-၅-၂)၊ (၄-၂-၁-၃) ပုံစံကို အလျင်းသင့်သလို ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ပြီး ပြင်သစ်အသင်းနည်းပြ ဒက်စ်ချမ့် Deschamps ကလည်း တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အခါ (၄-၃-၃)၊ ကွင်းလယ်ကို ခံစစ်ပုံစံသွားချင်ရင် မာတွီဒီ Matuidi ၊ ကွန်တေ Kanté ၊ ပေါ့ဘာ Pogba တို့ကို Defensive Midfield ပုံစံနဲ့ ကစားသွားတယ်။
ဒီနေရာမှာ မာတီနက်ဇ်ရဲ့ အမှားတချို့ကို ထောက်ပြချင်တယ်။ ကွင်းလယ်မှာ Out Of Form ဖြစ်နေတဲ့ ဖယ်လေနီ Fellaini ကို ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တာ၊ Right Back အဖြစ် ချက်ဒ်လီ Chadli ကို သုံးခဲ့တာက မှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ဖယ်လေနီဟာ မန်ယူမှာကတည်းက ပုံမှန်ခြေစွမ်း ပျောက်နေတတ်သူဖြစ်ပြီး Attacking မှာရော၊ Defensive မှာပါ သာမန်ထက် မပိုပါဘူး။ သူ့နေရာမှာ မာတင်စ် Mertens ကို ပွဲထုတ်သင့်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။ ဖယ်လေနီ၊ ဒမ်ဘီလီ၊ ၀စ်ဆဲလ် အတွဲအဖက်က အလုပ်မဖြစ်ခဲ့သလို Right Wing Back ပုံစံနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ချက်ဒ်လီနဲ့ ဒီဘရိုင်းနား တို့ တွဲလို့ မရခဲ့တာကြောင့် ဘယ်လ်ဂျီယံတိုက်စစ်က ဟာဇက် တစ်ဦးတည်းနဲ့ပဲ ရုန်းနေရသလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဒီဘရိုင်းနားက ညာတောင်ပံကနေ အထဲကို ၀င်လာရင် ဖယ်လေနီနဲ့ လူထပ်သွားသလို၊ ချက်ဒ်လီ ညံ့ဖျင်းနေတာကြောင့် ညာတောင်ပံတိုက်စစ်က အသက်မဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကွင်းလယ်က ဘောလုံးမထွက်ချိန်မှာ Lone Striker အဖြစ် ကစားတဲ့ လူကာကူလည်း ဘာမှ လုပ်လို့ မရခဲ့ဘဲ နောက်အထိဆင်းပြီး ဘောလုံးယူရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ မာတီနက်ဇ်ဟာ ဂိုးစောစောရရင် ခံစစ်ကစားဖို့ ပြင်ဆင်ထားပုံပါပဲ။
ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ ကစားပုံကတော့ တည်ငြိမ်လွန်းပါတယ်။ ပွဲအစပိုင်းမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံက ဖိအားပေးနေပေမယ့် ပြာ မသွားဘဲ ခံစစ်က အမ်တီတီ၊ ဗာရန်း တို့ အမှားအယွင်းမရှိ ကစားနိုင်ခဲ့သလို ကွန်တေ၊ ပေါ့ဘာတို့ကလည်း ခံစစ်နဲ့တိုက်စစ်မျှအောင် ကစားသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီပွဲမှာ ကွန်တေဟာ Deep Lying Midfielder ပုံစံကစားခဲ့ပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံကွင်းလယ်တိုက်စစ်က ဒီဘရိုင်းနား ဘောလုံးမထွက်အောင် Cover လုပ်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။
နောက်တစ်ခုက ပေါ့ဘာပါ။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေက ပြင်သစ်အသင်း တိုက်စစ်ပြန်စရင် ထိရောက်မှုရှိခဲ့သလို အားအနည်းဆုံးလို့ဆိုရမယ့် ညာနောက်ခံလူ ပါဗာ Pavard ကို Support လုပ်ခဲ့ပြီး ဟာဇက် လှုပ်လို့မရအောင် ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာပေရဲ့ တိုးအား၊ ရုန်းအားတွေကလည်း ဘယ်လ်ဂျီယံခံစစ်ကို အလုပ်ရှုပ်စေခဲ့ပြီး အထောင်တိုက်စစ်မှူး ဂျရူး ဒီပွဲမှာ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ အသင်းကို ကူညီပေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်း ပွဲအစပိုင်းလောက်မှာ အခွင့်အရေးကောင်းတွေရခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြင်သစ်အသင်းက အသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တာကို ပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့ခဲ့ရမှာပါ။
ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကို လုံးဝ Space မပေးခဲ့တဲ့အပြင် ဘယ်လ်ဂျီယံကစားသမားတွေကိုယ်တိုင် ကိုယ့်လူနဲ့ ကိုယ်ထပ်နေသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် ပွဲချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပြင်သစ်အသင်းက ပွဲကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြင်သစ်အသင်းဟာ ဗိုလ်လုပွဲကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Photo: thegoldwater.com,dailymaverick,Youtube,Getty Images,Twitter
ပွငျသဈ-ဘယျလျဂြီယံ ကစားခဲ့တဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲကို နညျးဗြူဟာပိုငျးအရ သုံးသပျကွညျ့ရအောငျ
မနကေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွငျသဈနဲ့ဘယျလျဂြီယံတို့ရဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုငျနယျပှဲမှာတော့ ပွငျသဈအသငျးက နောကျခံလူ အမျတီတီ Umtiti ရဲ့ တဈလုံးတညျးသော ဂိုးနဲ့အနိုငျယူပွီး ဗိုလျလုပှဲကို တတိယအကွိမျ မွောကျ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပါပွီ။ နှဈသငျးစလုံးမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှေ ပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ ပှဲက တကယျ့ကို အကွိတျအနယျရှိခဲ့ပွီး ဖြျောဖွမှေုပေးနိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲကောငျးတဈပှဲဖွဈခဲ့တယျ။ အဲဒီနှဈသငျးရဲ့ ခွစှေမျး၊ ကစားကှကျနဲ့ပတျသကျပွီး Tactical View အရ သုံးသပျခငျြပါတယျ. . .
နှဈသငျးစလုံးရဲ့ ပှဲထှကျကစားပုံက (၄-၂-၃-၁) ပုံစံဆိုပမေယျ့ ဘယျလျဂြီယံနညျးပွ မာတီနကျဇျ Martínez က (၃-၅-၂)၊ (၄-၂-၁-၃) ပုံစံကို အလငျြးသငျ့သလို ပွောငျးလဲအသုံးပွုခဲ့ပွီး ပွငျသဈအသငျးနညျးပွ ဒကျဈခမျြ့ Deschamps ကလညျး တိုကျစဈဆငျတဲ့အခါ (၄-၃-၃)၊ ကှငျးလယျကို ခံစဈပုံစံသှားခငျြရငျ မာတှီဒီ Matuidi ၊ ကှနျတေ Kanté ၊ ပေါ့ဘာ Pogba တို့ကို Defensive Midfield ပုံစံနဲ့ ကစားသှားတယျ။
ဒီနရောမှာ မာတီနကျဇျရဲ့ အမှားတခြို့ကို ထောကျပွခငျြတယျ။ ကှငျးလယျမှာ Out Of Form ဖွဈနတေဲ့ ဖယျလနေီ Fellaini ကို ပှဲထှကျကစားသမားအဖွဈ အသုံးပွုခဲ့တာ၊ Right Back အဖွဈ ခကျြဒျလီ Chadli ကို သုံးခဲ့တာက မှားယှငျးခဲ့တယျလို့ ဆိုရမယျ။ ဖယျလနေီဟာ မနျယူမှာကတညျးက ပုံမှနျခွစှေမျး ပြောကျနတေတျသူဖွဈပွီး Attacking မှာရော၊ Defensive မှာပါ သာမနျထကျ မပိုပါဘူး။ သူ့နရောမှာ မာတငျဈ Mertens ကို ပှဲထုတျသငျ့တယျလို့ ယူဆမိတယျ။ ဖယျလနေီ၊ ဒမျဘီလီ၊ ဝဈဆဲလျ အတှဲအဖကျက အလုပျမဖွဈခဲ့သလို Right Wing Back ပုံစံနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ခကျြဒျလီနဲ့ ဒီဘရိုငျးနား တို့ တှဲလို့ မရခဲ့တာကွောငျ့ ဘယျလျဂြီယံတိုကျစဈက ဟာဇကျ တဈဦးတညျးနဲ့ပဲ ရုနျးနရေသလိုဖွဈခဲ့ရတယျ။
ဒီဘရိုငျးနားက ညာတောငျပံကနေ အထဲကို ဝငျလာရငျ ဖယျလနေီနဲ့ လူထပျသှားသလို၊ ခကျြဒျလီ ညံ့ဖငျြးနတောကွောငျ့ ညာတောငျပံတိုကျစဈက အသကျမဲ့သလိုဖွဈခဲ့တယျ။ ကှငျးလယျက ဘောလုံးမထှကျခြိနျမှာ Lone Striker အဖွဈ ကစားတဲ့ လူကာကူလညျး ဘာမှ လုပျလို့ မရခဲ့ဘဲ နောကျအထိဆငျးပွီး ဘောလုံးယူရတဲ့အထိဖွဈခဲ့တယျ။ မာတီနကျဇျဟာ ဂိုးစောစောရရငျ ခံစဈကစားဖို့ ပွငျဆငျထားပုံပါပဲ။
ပွငျသဈအသငျးရဲ့ ကစားပုံကတော့ တညျငွိမျလှနျးပါတယျ။ ပှဲအစပိုငျးမှာ ဘယျလျဂြီယံက ဖိအားပေးနပေမေယျ့ ပွာ မသှားဘဲ ခံစဈက အမျတီတီ၊ ဗာရနျး တို့ အမှားအယှငျးမရှိ ကစားနိုငျခဲ့သလို ကှနျတေ၊ ပေါ့ဘာတို့ကလညျး ခံစဈနဲ့တိုကျစဈမြှအောငျ ကစားသှားနိုငျခဲ့တယျ။ ဒီပှဲမှာ ကှနျတဟော Deep Lying Midfielder ပုံစံကစားခဲ့ပွီး ဘယျလျဂြီယံကှငျးလယျတိုကျစဈက ဒီဘရိုငျးနား ဘောလုံးမထှကျအောငျ Cover လုပျကစားနိုငျခဲ့တယျ။
နောကျတဈခုက ပေါ့ဘာပါ။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတှကေ ပွငျသဈအသငျး တိုကျစဈပွနျစရငျ ထိရောကျမှုရှိခဲ့သလို အားအနညျးဆုံးလို့ဆိုရမယျ့ ညာနောကျခံလူ ပါဗာ Pavard ကို Support လုပျခဲ့ပွီး ဟာဇကျ လှုပျလို့မရအောငျ ထိနျးထားနိုငျခဲ့တယျ။ ဘာပရေဲ့ တိုးအား၊ ရုနျးအားတှကေလညျး ဘယျလျဂြီယံခံစဈကို အလုပျရှုပျစခေဲ့ပွီး အထောငျတိုကျစဈမှူး ဂရြူး ဒီပှဲမှာ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ပမေယျ့လညျး အတိုငျးအတာတဈခုအထိတော့ အသငျးကို ကူညီပေးသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘယျလျဂြီယံအသငျး ပှဲအစပိုငျးလောကျမှာ အခှငျ့အရေးကောငျးတှရေခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ ပွငျသဈအသငျးက အသာစီးနဲ့ကစားနိုငျခဲ့တာကို ပရိသတျတှေ မွငျတှခေဲ့ရမှာပါ။
ဘယျလျဂြီယံအသငျးကို လုံးဝ Space မပေးခဲ့တဲ့အပွငျ ဘယျလျဂြီယံကစားသမားတှကေိုယျတိုငျ ကိုယျ့လူနဲ့ ကိုယျထပျနသေလိုဖွဈနတောကွောငျ့ ပှဲခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ပွငျသဈအသငျးက ပှဲကို လှမျးမိုးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ပွငျသဈအသငျးဟာ ဗိုလျလုပှဲကို ထိုကျထိုကျတနျတနျရောကျရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။